နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > ရီစရာလေးများရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာလေးပါ3
Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:09pm
လက်မထပ်မီ and လက်ထပ်ပြီးနောက် လက်မထပ်မီ သူ...... သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ငါ့မျှော်လင့်တဲ့နေ့ ရောက်လာခဲ့ပြီ။ သူမ.... နင် နောင်တရမလား သူ...... ဟာ.. တစ်ခါမှ အဲဒီလို မစဉ်းစားမိဘူး။ သူမ.... ငါ့ကို တကယ်ချစ်လား သူ...... တကယ်ပေါ့။ သူမ.... ငါ့အပေါ် သစ္စာဖောက်မှာလား။ သူ...... အဲဒီလို တစ်ခါမှ မတွေးထားမိဘူး။ သူမ.... ငါ့ကို တစ်ခါလောက် နမ်းပါလား။ သူ...... အင်း.. တစ်ခါထက်ကို မကဘူး။ သူမ.... ယူပြီးရင် နင်ငါ့ကို ရိုက်မှာလား။ သူ...... လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တာ သူမ.... ငါ နင့်ကို ယုံရမလား... လက်ထပ်ပြီးနောက် စာကို အောက်မှ အထက်သို့ တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါ။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:11pm
သိကောင်းစ၇ာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၏ ကိုယ်ေ၇း၇ာဇ၀င် ဟာသမျာ > မေး-ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုတာနာမည်အရင်းပဲလား။ > ဖြေ-ပာုတ်ပါတယ်။ဒို့ကမွေးတုန်းကအသားအရမ်းမဲတယ်လေ....ပြီးတော့လဲဒို့မိဘတွေကအသားအရမ်းမဲနေတဲ့ဒို့ကိုဖြူတာလေးပါသွား > အောင် လို့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း လို့ မှည့်ခဲ့တာပေါ့...(ခစ်) > > မေး-အခုကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဆရာဝန်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်မလုပ်....... > ဖြေ- > အင်းဒါကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ...ဒို့ကဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ > စာကကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးလေ ဆရာဝန်ဖြစ်လို့ဆေးကုလဲ ဘယ်လိုပြော မလဲနော်.... > (ပီား)တော်ကြာဒေါက်တာ (အလောင်းစည်သူ) > ဖြူဖြူကျော်သိန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့..... > > မေး-အနုပညာကိုဝါသနာပါလာရတဲ့အကြောင်းရင်းခံလေးများပြောပြပါလား။ > ဖြေ- > အော်...ဒါလား....ဖြူဖြူကလေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ၀ါသနာပါတယ်လို့တော့ > မပာုတ်ဘူး ပေါ့နော်...ဒါပေမဲ့လဲ လူတွေက > ပေါတောတောလုပ်ပြရင်ကြိုက်ကျတယ်မပာုတ်လား။ဒါကြောင့်ဖြူဖြူက ပေါတောတော > တွေလုပ်ပြရတာပေါ့။ ပြီးတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ စာကလဲ > ကောင်းကောင်းမရတာလဲ ပါတာပေါ့နော်။ အခုချိန်မှာ လုပ်စားလို့ ကောင်းတဲ့ > ပေါတောတောတွေပဲလုပ်တာ ဆေးကုတာထက်ပိုပြီး income ကကောင်းမယ်လို့ > ထင်မိလို့သီချင်းဆိုကြည့်တာပါ။ > > မေး-အနုပညာကိုငယ်ငယ်ထဲက ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာလေးများ ရှိရင် > ပြောပြပါလား။ > ဖြေ- > အော်…ဒါကတော့လေ..ဖြူဖြူက ငယ်ငယ်က သရဲ အရမ်းကြောက်တော့ > အိမ်သာတက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေချိုးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သီချင်းတွေကို > အကျယ်ကြီးအော်ဆိုတာပေါ့….ဘယ်လောက်များသရဲကြောက်တတ်လဲ ဆိုရင် ဖြူဖြူတခါမှ > မှန်မကြည့်ဘူးလေ။ အခုကျတော့ အဲဒီတုန်းက သရဲကြောက်လို့ဆိုတာကို > ၀ါသနာပါတယ်ဆိုပြီး ဆွဲထည့်တာပေါ့ နော်။ > > မေး-အခုကျောင်းပြီးပြီဆိုတော့ ပောာက်ဆာဂျင်လုပ်မလုပ်လေးပြောပါအုန်းနော်... > > ဖြေ- > အော်...ဒါလား။ဖြူဖြူကိုဆို ကလေးမိဘတွေက အရမ်းအားကိုးတယ်...အခုခေတ်ကလဲ > ကလေးတွေက အရင်လိုဒေဝေါနဲ့ > ခြောက်ရင်မကြောက်တော့ဘူးလေ။အဲတော့ကလေးတွေငြိမ်အောင်လို့ ဆိုပြီးတော့ > ပိာုအသားမဲမဲနဲ့ဆရာဝန်မကြီး ကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုး > ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ပြောရင်ကလေးတွေကကြောက်ကျတယ်လေ.. > > မေး-ဒါဆိုဖြူဖြူကပေါတောတောလုပ်နေရတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းသဘောပေါ့နော်။ > ဖြေ- > ဒါတော့မပာုတ်ဘူး။ဖြူဖြူကနဂိုထဲက ပေါတောတော၊ရူးကြောင်ကြောင်လုပ်ပြီး > လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာ ငယ်ငယ်ထဲကပါ... > > မေး-ဖြူဖြူက ပွဲကျရင် ၀တ်စားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ > သီချင်းမဆိုခင်လူမမြင်အောင်နေတယ်နော်…အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တခု ခု > လောက်များ ရှင်းပြပါလား။ > ဖြေ- > ခစ်ခစ်ခစ်…ဖြူဖြူကလေ ၀တ်လို့ရှိရင်ပုံပုံစတိုးကမှ ၀တ်တာ။ > ဈေးလဲသက်သာတယ်လေ..ဖြူဖြူကိုယ်တိုင်ပဲ ဖရေဇာမှာရှိတဲ့ ပုံပုံစတိုး မှာ > ရွေးယူတာပေါ့။ လူတွေကတော့ ဖြူဖြူကို အပြင်မှာမြင်ရင်မမှတ်မိကျဘူးလေ။ > ဒါပေမဲ့တော်တော်များများက ပုံပုံအထည်ဆိုရင် သိတာများလို့ ဖြူဖြူက ထမင်တကာ > ပိုက်ဆံပေးပြီးကြည့်ရတဲ့ ပရိသတ်အတွက်ပဲ လို့ ပာန်လုပ်ပြီးပြောရတာပါ။ > မဆိုခင်လူတွေတွေ့သွားရင် ဖြူဖြူကို ပုံပုံအထည်တွေ ၀တ်ထား တယ်ဆိုတာ > သိကုန်ကျမှာပေါ့။ စင်ပေါ်ရောက်တော့ မီးရောင်နဲ့ ဆိုတော့ ပုံပုံအထည်မှန်း > သိပ်မသိတော့ဘူးလေ။ > > မေး-ဖြူဖြူကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကိုင်းရှိုင်းတယ်နော်။ > ပထမဆုံးစီးရီး အင်တာဗျူးတုန်းက ဘုရားသခင်ပေးသနားတဲ့ > အသံလို့ပြောဘူးတယ်နော် > ဖြေ- > အော်....ဒါကလဲအဲဒီတုန်းကဒီလိုမျိုးပေါတောတောစလုပ်ရမှာဆိုတော့ > မအောင်မြင်ရင်ရှက်စရာကြီးလေ...ဒါကြောင့် ကိုယ့်အပြစ်မဖြစ် > အောင်လို့ဘုရားသခင်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါ။ခစ်...ခစ်...အောင်မြင်ရင်တော့ကိုယ်တော်လို့ပေါ့နော် > > မေး-အခုလက်ရှိမှာရောအောင်မြင်ပြီလို့ပြောလို့ရပြီလား။ > ဖြေ- > ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်...လူဆိုတာကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့...ပေါတောတောလုပ်ပြတာကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ > ဖြူဖြူကိုအရမ်းအားပေးတာပေါ့။ တချို့ကျတော့လဲ ဖြူဖြူကို ပေါတာမ ပေါ့လေ... > ဖြူဖြူကတော့ ကိုယ့်ကိုပေါတာမလို့ > ခေါ်တာကိုလုံးဝစိတ်မဆိုးပါဘူး။မှန်တာကိုခေါ်တာပဲနော်စိတ်ဆိုးစရာလား...ခစ်ခစ်ခစ်ခစ် > > မေး-ဖြူဖြူကသီချင်းဆိုတဲ့အခါမှာပာန်ပန်အပြည့်နဲ့ဆိုတယ်နော်....အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက် > ရှင်းပြ ပါအုန်း။ > ဖြေ- > ဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရှည်ကြီးပဲ..ကြုံကြိုက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့...ဖြူဖြူရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့သူတွေက > ကြီး(၃)ကြီးမဲပလေ လို့ခေါ်တယ်လေ...ပထမကြီးတကြီးက သောက်စားကြီးတာပါ၊ > ဒုတိယကြီးကတော့ သောက်ပြောကြီးတာပါ၊နောက်ဆုံးကြီးကတော့ > သောက်ပျင်းကြီးတာပါ။ဥပမာပြောရရင် ဖြူဖြူ့ အရင်တုန်းက > အေးချမ်းမေရဲ့သီချင်းကို ယုဇန က ဆိုတုန်းက လူတွေက မကြိုက်ကျဘူးလေ.. City > FM နှစ်ပတ်လည်မှာ ဖြူဖြူအလှည့်လဲကျရော > ဖြူဖြူကအားလုံးထက်သာအောင်ဆိုမယ်ပေါ့နော်... အရည်အချင်းကနဲတော့ > ပာာမိုနီလိုက်မဲ့သူတွေကိုအများကြီးခေါ်၊ပြီးတော့သီချင်းဆိုတာကိုလူတွေသိပ်ပြီးသတိမထားမိအောင်လို့ > ဖြူဖြူထက် ရုပ်ချောတဲ့မော်ဒယ်လ်ကိုသုံး။ဒီလိုမျိုးကြံဖန်ရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့လဲအဲဒီနေ့ကဖြူဖြူက > ပဲကြီးပာင်းတွေ စားထား တယ်လေ.... ၀တ်ထားတာကလဲအဖြူရောင်ဆိုတော့ > တော်တော်နေရခက်တာပေါ့နော်......သီချင်းကိုဆိုနေရင်း နဲ့ ဖြူဖြူက > အရမ်းဗိုက်နာလာတယ်လေ...ဒါကြောင့်မျက်နှာကြီးကို ရှူံမဲ့ထားတာပေါ့။ > နောက်ပြီး ဗိုက်က အရမ်းနာနေတော့ သီချင်းဆိုနေရင်းထွက်ကျမှာစိုးလို့ > စင်ပေါ်မှာ ပိာုလျှောက်လိုက်၊ဒီလျှောက်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတာပေါ့... > ခစ်ခစ်ခစ်.. တခုကံကောင်းတာက လူတွေက ဖြူဖြူဗိုက်နာ နေတာကိုမသိဘူးလေ... > ဖြူဖြူခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဆိုနေတယ်ပဲ > ထင်နေကျတာလေ....သီချင်းလဲဆိုပြီးတော့ဖြူဖြူလဲ > တန်းပြီးအိမ်သာကိုပြေးရတာပဲ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်….ဖြူဖြူကို ပရိသတ် က > တကယ် လက်ခံပြီ ဆိုရင် ဆုတွေပေးတဲ့အထဲ မှာ ဖြူဖြူပါရမှာပေါ့။ > အခုသူများတွေပဲရတယ်ဆိုတော့ ဖြူဖြူကို လူတွေက သိပ်ပြီးလက်မခံ သေးတဲ့ > သဘောရောက်တာပေါ့။ > > မေး-ဖြူဖြူစင်္ကာပူမှာ သီချင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ > ပြောချင်တာလေးတွေရှိရင် တခုလောက်…. > ဖြေ- > ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပဲ။ ပာမ်ဘာဂါတလုံးကို > (၃၅)ဒေါ်လာပေးရတယ်ဆိုတာက ဆင်လောက်ကြီးတဲ့ ပာမ်ဘာဂါကိုပြောတာ ဖြူဖြူတို့ > စားတဲ့ ဘာဂါက (၃၅) ဒေါ်လာဆိုတာ လူ (၁၀)ယောက်စာကိုပြောတာလေ။ ဒါပေမဲ့ > အင်တာဗျူးတခုမှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြီးတာပေါ့ ။ဘယ်ရမလဲ။ ပြီးတော့လဲ > ပရိုဂျူဆာတွေက လာကြည့်တယ်ဆိုတာကလဲ သူတို့ဖာသာ စင်ကာပူ ဂေးလန်းကို > လာတာလေ.. လမ်းကြုံလို့ဝင်ကြည့် သွားတဲ့သဘောပါ။ သူတို့အ်ိမ်တွေကိုလဲ > အကြောင်းပြလို့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်။ > > မေး-ဖြူဖြူကပြောတော့ စင်္ကာပူမှာသီချင်းဆိုတုန်းက > ခေါင်းကိုမော့ပြီးဆိုတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ > ဖြေ- > အော်…ဒါလား။ဖြူဖြူရဲ့ အရပ်က ခွေးပစ်တဲ့တုတ်သာသာလေးပဲ ရှိတာဆိုတော့ > အရပ်ကို မရှည်ရှည်အောင်လို့ မော့ထားရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်တာဗျူးမှာကျတော့ > လူတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြီးဖြန်းတာပေ့ါ။ > > မေး-စင်ကာပူမှာ လာပြီးအားပေးတဲ့ မြန်မာတွေရော များလား။ > ဖြေ- > ခစ် ခစ် ခစ် လူဆိုတာမျိုးက လမ်းဘေးက မျောက်ပွဲတောင်အုံကြည့်ကျသေးတာပဲ… > လာကြည့်ကျတာပေါ့။ အများကြီးတော့ မပာုတ်ပါဘူး။ (၃) (၄) ယောက်ပေ့ါနော်။ > ပြီးတော့ သူတို့တွေပွဲလဲပြီးရော ငိုကျတယ်။ လာကြည့်ရတဲ့ ပိုက်ဆံကို > မုန့်စားတာမှ ပိုပြီး အကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့… > > စူးရှအက်ကွဲပြီး မျောက်မင်းအူသံ နဲ့ သီချင်းဆို၊ အ၀တ်အစားဒီဇိုင်း > ပေါကြောင်ကြောင် နဲ့ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီး အဆိုတော် ဘယ်သူလဲ လို့ > မေးရင် အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ဖြူ > ဖြူကျော်သိန်းလို့ပြောကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး ပေါကြောင်ကြောင် > မိန်းကလေး တယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘာတွေရှိတယ်ဆိုကို ပရိသတ်တွေ ကိုသိစေ > ချင်တဲ့ အတွက် ကျွှန်တော် ကိုကိုမောင် တော်တော်ဆိုး ကိုယ်တိုင်ပဲ > သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအင်တာဗျူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ > > မေး-ဖြူဖြူအင်တာဗျူးအပိုင်း (၁) မှာ ဘုရားသခင် ကို ကောင်းကောင်းကြီး > ခုတုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖြူဖြူပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။ > ကျွှန်တော်နောက်တခုသိချင်တာက ငယ်ငယ် က ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး > လုပ်ခဲ့တာလေးတွေ၊ မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့တာလေးတွေကိုပြောပြပါအုန်း။ > ဖြေ-ခစ်ခစ်ခစ် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖြူဖြူက sunday school ကို တက်ရတယ်။ > အဲဒီမှာ ဘုရားသီချင်းတွေဆိုရတာပေါ့နော်.....အဲဒီလိုဆိုရပြီးဆိုဖြူဖြူကို > ဘယ်တော့မှ မဆိုခိုင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တခြားသူတွေ > ဘုရားသီချင်းကို မုန်းသွားမှာစိုးလို့ပေါ့ (ခစ်ခစ်ခစ်) ပြီးတော့ > ဘုရားကျောင်းကို တက်တယ် ဆိုတာကလဲ ယုံကြည် လွန်းလို့တော့ မပာုတ်ပါဘူး။ > ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ရည်းစားလေး ဘာလေး ရမလားလို့တက်နေရတာ... > > မေး-ဒါဆို ဖြူဖြူ့ရဲ့ အချစ်အကြောင်းလေး > တီးတိုးလေးများရှိခဲ့ရင်တခုလောက်ပြောပြပါအုန်း။ > ဖြေ- ဖြူဖြူ က ကိုယ်တိုင်သာ အသားမဲတာ ဒါပေမဲ့ ရည်းစားကျတော့ > အသားဖြူတဲ့လူကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်လေ။ အခုချိန်ထိတော့ ဖြူ့ ကို > ကြိုက်တဲ့လူတယောက် မှမရှိသေးဘူး။ ကျောင်းတက်တုန်းကဆို ဖြူဖြူက > လိုက်ကြိုက်တာတောင် ကောင်လေးတွေက ထွက်ပြေးကျတယ်လေ....ဒါကြောင့် ဖြူဖြူရဲ့ > အရင်းနှီးဆုံး သူငယ် ချင်းတွေက ဆို ဖြူဖြူကို ရွယ်ခူးလို့ခေါ်တယ်လေ..... > (ကိုယ်ရည်ရွယ်လိုက်ရင် သူများကခူးသွားလို့ပေါ့) ခစ်ခစ်ခစ် > > မေး-ဒါဆိုဆေးကျောင်းတက်တော့ မှ ချစ်သူရတယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့ > ဖြေ-ဆေးကျောင်းကလူတွေကပိုဆိုးတယ်...စာပဲစိတ်ဝင်စားကျတာ..ဖြူဖြူကို > ဂရုတောင်မစိုက်ကျဘူး။ တခါတလေတော့ သန့်ရှင်းရေးကုလားမနဲ့တော့ တချို့က > မှားဘူးကျတယ်လေ......ကြိုက်မဲ့သူလုံးဝကိုမရှိခဲ့တာပါ.... > မေး-ဖြူဖြူကိုအဆိုတော်မဖြစ်ခင်ဆေးကျောင်းက အမှတ်တရလေးတခုလောက် > ဖြေ-ဖြူဖြူကဆယ်တန်းနဲ့ ဆေးကျောင်းမပြီးခင် ........အင်းဘာလို့ပြောရမလဲ > အဆိုတော်မဖြစ်ခင်က နည်းနည်းဝတယ်လေ..အဲဒါကြောင့် တချို့က နဂိုကလဲမဲတော့ > ဖြူဖြူကို ဆေးဘဲဥ လို့တော့ ချစ်စနိုးခေါ်ကျတယ်။ > မေး-ဖြူဖြူအားတဲ့အချိန်ကျရင်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလေးတခုလောက် > ဖြေ-အော်ဒါလား...ပြောပြီးသားပဲလေ...ဖြူဖြူကသောက်ပျင်းကြီးတော့ > စားပြီးရင်အိပ်နေတာပေါ့လို့ ...........ခစ်ခစ်ခစ် ဒါပေမဲ့ တခါကတော့ > ဖြူဖြူမအိပ်ပဲ ကဗျာတပုဒ်ရေးဘူးတယ်။ ပာင်းပာင်းပာင်း( > အောက်ကလိသံဖြင့်ရီသည်) ဖြူဖြူ့ ကဗျာကိုလူတိုင်းကကောင်းလွန်းလို့တဲ့ > ....ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တယ်လို့တော့မပာုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ > ကျော်ကြားချင်တော့လဲ စိတ်ကူးတည့်ရာလျှောက်လုပ်တာပေါ့နော်....... > > ရင်မှာမီးတောက် > > ဖင်မှာချီးခြောက် > > အဲဒါမင်းကြောင့် > > အဲဒါဖြူဖြူစပ်ထားတဲ့ကဗျာလေ...ခစ်ခစ်ခစ် > > မေး-ဖြူဖြူကသီချင်းဆိုတာတဖက်နဲ့ ကျောင်းကတဖက်ဆိုတော့ > တော်တော်ပင်ပန်းခဲ့မှာပေါ့နော် > ဖြေ- အော်ဒါကတော့ ဖြူဖြူ့ရဲ့ မမကျေးဇူးလို့ပြောရင်ရတယ်လေ။ဖြူဖြူ့ရဲ့ မမက > စာတော်တော့ ဆရာ ဆရာမတွေက မမကိုချစ်ကျတယ်လေ။ဖြူဖြူကတော့စာမရ > တာများတယ်လေ။အဲတော့ မမကပဲဆရာတွေကို > ကန်တော့ပြီးဖြူဖြူ့ကိုမအောင်အောင်လို့ကို လုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့။ဆရာတွေကလဲ > ဒီတိုင်းတော့ လုပ်မပေးဘူးလေ ဖြူဖြူနဲ့ ဖြူဖြူ့အမကို > ဂတိတခုတောင်းတယ်.....ဆေးကျောင်းပြီးသွားရင်ဆေးမကုစားပါဘူးလို့လေ။ > > မေး-ဖြူဖြူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါအုန်း > ဖြေ-ဖြူဖြူကလဲ ကြွားချင်....အဲလေ...ပြောချင်နေတာ။အဲဒီအချိန်တုန်းက > အဆိုတော်တွေ ရေခမ်းလို့ > ရေခပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေ။ပာိုး....ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပြန်ဆို > တေးတွေဆိုပြီး ပရိသတ်ဆီက ငွေချူ နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ပြီးတော့လဲ > အဲဒီအချိန်တုန်းက အတွဲအခွေတွေခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ > ဖြူဖြူ့အခွေကိုထုတ်တာပါ။အဲဒီ အချိန်တုန်းက အခွေထွက်တဲ့နေ့မှာပဲ ဖေဖေ က > သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နီးစပ်ရာတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး > ဖြူဖြူ့အခွေတွေကိုပြန်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်လေ.....ပြီးတော့လဲစပြီးထုတ်ထဲ က > နည်းနည်းလေးပဲ ထုတ်တာဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ကုန်ပြီး > အခွေတွေကရောင်းကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်ယူရတာပေါ့နော်။လူတွေကိုလဲ > ဖြူဖြူအခွေကို ကောင်းတယ်ပြော အောင်လို့ ဘုရားကိုပဲ > ဘယ်လောက်ကြီးယုံကြည်ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုဘာညာဘာညာပေါ့နော်........တော်တော်ကြီးကိုလုပ်ယူရတာပါ။ပြီးတော့လဲ > ဖြူဖြူကိုယ်တိုင် ပလန်းနက်တို့၊ပုဂံနက်တို့မှာ nick မျိုးစုံနဲ့ > ဖြူဖြူကျော်သိန်းက အတော်ဆုံး၊အကောင်းဆုံးတွေ လျှောက်ရေးတာပေါ့။ > > မေး-နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေရဲ့ > အခွေတွေခိုးကူးခံကျရတယ်နော်....ခိုးကူးခံရတယ်ဆိုတာကလဲ > နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖြစ်မှ ဆိုတော့ ခိုးကူးခွေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သဘောထား > လေးပြောပြပါအုန်း > ဖြေ-အော် ဒါက ဖြူဖြူအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ (ဗမာစကားနဲ့ > ပြောရရင်ပေါ့နော်)....၀ဋ်လည်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ > ဖြူဖြူက အတန်းစဉ်စာခိုးချ ခဲ့တယ်၊ပြီးတော့လဲ သူများသီချင်းတွေကို > ကော်ပီတင်မပာုတ်ဘူး စတိုင်ကိုပါခိုးတာဆိုတော့ > ဖြူဖြူကတော့ခိုးချင်ခိုးပါစေပေါ့နော်...ဖြူဖြူခိုးခဲ့တဲ့ ငရဲတွေ ချေပေး > တယ် လို့ပဲမှတ်ပါတယ်။(ဒီနေရာအင်တာဗျူးပြုလုပ်သူကိုကိုမောင်အရမ်းကိုအံ့သြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာမွေး၊မြန်မာပြည်မှာကြီးပြင်းပြီး > ဗမာစကားနဲ့ပြောရရင်လို့ ပြောလို့ပါ) > > မေး-ဖြူဖြူ့ကို အိုင်စီက စင်တင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါအုန်း။ > ဖြေ-အဲဒီအချိန်တုန်းက ပေါကြောင်ကြောင်လုပ်ပြမှခေတ်စားတာဆိုတော့ > အိုင်စီအနေနဲ့ ကပေါကြောင်ကြောင်လုပ်မဲ့သူလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ > သူတို့က ဖြူဖြူကို လဲတွေ့သွားတော့ > လိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူး...ပာန်ကျပြီဆိုပြီးဖြူဖြူ့ကို > စင်တင်ပေးကျတာပဲပေါ့။ဦးကိုကိုလွင်ကဆို စဆိုမဲ့နေ့မှာ ဖြူဖြူက > အဖြူရောင်ဝတ်လာ တော့ဘာပြောလဲဆိုရင် ငါတို့လူရွေးမမှားဘူးတဲ့ အသားမဲ > အရဲဆင်တဲ့ ဒီကောင်မလေးစင်ပေါ်မှာ ပေါတောတောလုပ်ပြဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ > ကိုချစ်စမ်းမောင် တို့ကလဲဝိုင်း ပြီးဆုတောင်းပေးကျတယ်..ပြီးတော့ > ဘာမှမကြောက်နဲ့၊တက်သာတက်လိုက်၊လုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့၊စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပေါတောတောတွေလုပ်ခဲ့လို့ > ၀ိုင်းမြှောက် ပေးကျတယ်။ > ဖြူဖြူကလဲမြှောက်ပေးစရာတောင်မလိုပါဘူးလေ...ယောင်္ကျားလေးသာဆို > တက်ပြီးတော့သေတယ်.... > > မေး-ပိာုတလောက ရခိုင်လေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြူဖြူ > ကဗျာရွတ်လိုက်သေးတယ်နော်..ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တခုခုလောက်ပြောပါအုန်း > ဖြေ-ဖြူဖြူအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲလေ...ဖြူဖြူကိုယ်တိုင်လဲကဗျာစပ်တယ်ဆိုတာ...လေဘေးဆိုရင်ဖြူဖြူကအရမ်းကိုရင်ခုန်တယ်လေ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ > ဖြူဖြူကိုယ် တိုင်ကလဲ လေဘေးထည်တွေပဲ > တစိုက်မတ်မတ်အားပေးခဲ့တာကိုး.........ခစ်ခစ်ခစ်ပြီးတော့လဲ > သီချင်းဆိုတာခေတ်မကောင်းတော့ရင် လိုင်းပြောင်းရတာ အဆင်ပြေအောင်လို့အခုထဲက > ကြိုပြီး စာပေလောကနဲ့ ပတ်သက်အောင်လုပ်ယူထားရတာပါ..........ဖြူဖြူရဲ့ > ပေါတောတောတွေကို လူတွေကရိုးသွားရင် စာပေ > လိုင်းထဲပြောင်းရအောင်လွယ်အောင်လို့ အခုထဲက ကဗျာရွတ်တာတို့လုပ်ထားတာပေါ့။ > > မေး-ဖြူဖြူကိုယ်တိုင်စပ်ခဲ့ English ကဗျာလေးရွတ်တာဆို....... > ဖြေ-ဒီကဗျာက ပာိုကဗျာထဲက နှစ်ကြောင်းလောက်၊ဒီကဗျာထဲက > တကြောင်းလောက်ခိုးချတာပေါ့။ men may come and men may go > ဆိုပြီးလို့တောင်ပါနေလို့ ဖြူဖြူ့အမက ဒီလောက်တော့ > ခိုးမချလို့တားရသေးတယ်လေ.......ကဗျာရွတ်တယ်ဆိုတာကလဲဘာခက်တာလိုက်လို့၊ > တွေ့ကရာလျှောက်ရွတ်ပေါ့...ခစ်ခစ် မြန်မာလိုရွတ်တာမှ > မပာုတ်တာ...လူတွေကသိပ်ပြီးသတိမထားမိဘူးလေ....နားမလည်အောင် > ရွတ်လိုက်တာပေါ့နော်...ဒါမှလဲ English ကို အရမ်းကျွမ်းပြီး ပီတဲ့ > ပုံစံမျိုးဖမ်းရတာပေါ့....ခစ်ခစ်ခစ်..... > > -- >0 Comments
ရည်းစားဟောင်းလက်ချာ (၁) ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့ရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါ။ (၂) အလိုက်မသိ စကားလာပြောပါက ပါးပိတ်ရိုက်ပါ။ (၃) ပြန်ပြီးဆက်သွယ်မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ့ရင် စေ့စေ့ကြည့်ပြီး အရှက်နည်းလှချည်လားဟု ပိတ်ပြောပစ်ပါ။ (၄) ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း လာပြောသူများရှိရင် သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံပဲဟု သနားသောလေသံဖြင့်ပြောပါ။ (၅) ရည်းစားဟောင်းကို တစ်ခါတစ်လေအိပ်မက်မက်ပါက ငါကံဆိုးလိုက်လေခြင်းဟု ညီးတွားပါ။ (၆) ရည်းစားဟောင်းအိမ်နားမှ မတတ်သာ၍ ဖြတ်သွားရရင်တောင် ဆိုးလိုက်တဲ့လမ်းဟု သုံးခါတိတိ ရေရွတ်ပါ။ (၇) ရည်းစားဟောင်းကို ပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားချင်လာပါက ငါစိတ်ကစားတာနေမှာပါလေဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆုံးမပါ။ (၈) ရည်းစားဟောင်းနှင့် သွားခဲ့ဖူးသောနေရာများရောက်မိ၍ သတိရချင်သလိုလိုဖြစ်လာပါက ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပြေပါစေတော့ဟု ထပ်ခါတလဲလဲ ဆုတောင်းပါ။ (၉) ရည်းစားဟောင်းဆီမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအချို့ လက်ခံရရှိပါက သြော်…. တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ရှိပါစေတော့ဟု စဉ်းစားပြီး ခပ်တည်တည်လက်ခံထားလိုက်ပါ။ (၁၀) ရည်းစားဟောင်းကို အခုထိချစ်နေမိတုန်းပဲဟု သေချာသွားပါက တိန်..တိန်.. တိန် ဟု သုံးခါအော်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပစ်လိုက်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:12pm
စိတ်ညစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Fortune Telling.. သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဗေဒင်ကိုယုံလား? ယုံတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရော.. မယုံတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရော...ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်..ဟဲဟဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ... ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့... ဆေးတက္ကသိုလ်(မကွေး)က သူတွေရေးထားတာ... ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်... ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရက်ကို ဂဏန်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းပါ..... ဥမပါ... (အဲလေ..မှားလို့).. ဥပမာ.. သင်သည် ၁၂ ရက်နေ့တွင်မွေးပါက ၃ ဂဏန်းဇာတာရှင်ဖြစ်သည်။ (ဟဲဟဲ.. ဗေဒင်ဆရာလေသံနဲ့ပြောကြည့်တာ...) ကဲ.. ကိုယ့်ရဲ့ ကံကြမ္မာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော် .. ငယ်ချင်းတို့... ဟဲဟဲ ၂ ဂဏန်းသမားများ သင်သည် ဤနှစ်ဝယ် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နှာပွခြင်းတို့ကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားရပေအံ့။ ပညာရေး - နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ခြင်းပညာကို လေ့လာရတတ်သည်။ စီးပွားရေး - နှစ်ရှည်လများက အကြွေးများကိုပြန်ရကိန်းရှိသည်။ အချစ်ရေး - နှမချင်းမစာနာတတ်သူ၏ ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်ခံရတတ်သည်။ ယတြာ - မိမိနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကို လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ပိတ်၍ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ကာ " နင့်သတင်းတွေ ငါကြားနေရတယ် " ဟု မဲ့ကာရွဲ့ကာဖြင့် မာန်ပါပါပြောပါလေ။ ၃ ဂဏန်းသမားများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံးမရဘူးဟုထင်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတတ်သည်။ သံစူးခြင်း၊ သန်းတွယ်ခြင်း၊ သေးမထွက်ခြင်းတို့ကို ခံစားရတတ်သည်။ ပညာရေး - အသုံးမကျအောင်နေထိုင်နည်းကို ဆရာသမားသုံးဦးမှ လမ်းညွှန်တတ်သည်။ စီးပွားရေး - သူခိုးခိုးခံရတတ်သည်။ တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းကို ပစ္စလတ်ခတ်သိမ်းထားပါ။ အချစ်ရေး - သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တတ်သည်။ သုံးဘီးကားမောင်းသူတစ်ဦးနှင့် ဖူးစာဆုံတတ်သည်။ ယတြာ - တစ်ကိုယ်လုံးဆေးနီတို့ပါ။ ပြီးလျှင် လမ်းသုံးခွဆုံရာသို့သွား၍ ခြေတစ်ဖက်ကို ထောက်ရပ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကိုလေထဲသို့ဆန့်တန်းပြီးခေါင်းငိုက်စိုက်ချထားပါ။ လည်ပင်းတွင်အောက်ပါ ဂမ္ဘီရအနောက်တိုင်းအင်းချပ်ကိုဆွဲထားပါ။ လူတကာ၏မေတ္တာစေတနာကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။ HIV (+) ၄ ဂဏန်းသမားများ လက်အောက်ငယ်သားများ၏ မလေးမခန့်လုပ်ခြင်းကို အောင့်သက်သက်ခံရတတ်သည်။ လိပ်ခေါင်းထွက်ခြင်း၊ လက်တုန်ခြင်း၊ လှုပ်မရခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ ပညာရေး - လစ်လျှင်လစ်သလိုကြိုးစားပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ လေးစားအောင်နေ၍ ကွယ်ရာတွင်မဟုတ်တာမှန်သမျှလုပ်သောပညာရပ်ကို သင်ကြားရတတ်သည်။ စီးပွားရေး - အလစ်သုတ်ခံရတတ်သည်။ ဈေးဝယ်လျှင် အလေးခိုးခံရတတ်သည်။ အချစ်ရေး - လေးလုံး(မျက်မှန်တပ်သူ) တစ်ဦးနှင့် ဖူးစာဆုံတတ်သည်။ မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမတစ်ဦး၏ လေးစားစွာဖြင့် ချစ်ခွင့်တောင်းခံရတတ်သည်။ ယတြာ - လစ်ပိုတစ်လုံးသောက်ပြီး လိပ်ဥ(၄၄)လုံးစားကာ လေးထပ်တိုက်ပေါ်မှနေ၍ လေးဘက်ထောက်၍ " အားလုံးကို လေးစားပါတယ် " ဟု အသံဝါကြီးဖြင့်လေးကြိမ်တိတိအော်ပါ။ ၅ ဂဏန်းသမားများ ဘ၀တစ်သက်တာတွင် ရေလိုက်ငါးလိုက်အနေရဆုံးဖြစ်သည်။ အမြင့်ရောက်ကိန်းရှိသည် ( ဥပမာ- ငါးထပ်တိုက်ပေါ်)။ ပညာရေး - ငါးပါးသီလကို စနစ်တကျချိုးဖောက်သော ပညာရပ်ကိုတတ်မြောက်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေး - ငါးစိမ်းသည်အလုပ်ဖြင့် အကျိုးပေးမည်။ အချစ်ရေး - ငှက်ဆိုးထိုးသံကဲ့သို့ အသံရှိသူနှင့်ဖူးစာဆုံတတ်သည်။ ငါးခူပြုံးပြုံးတတ်သူ ငါးဦး၏ အီစီကလီလုပ်ခြင်းကို ငါးရက်ခန့် သည်းခံရတတ်သည်။ ယတြာ - ငါးကြော်ဝယ်စားပြီး ငါးယောက်မြောက်တွေ့သည့်ကောင်မလေးကို ငါးမန်းအကြည့်ဖြင့်ကြည့်၍ "ကကြီးဖင်မှာ ပွေးတွေနဲ့၊ ခခွေးဖင်မှာ ပွေးတွေနဲ့၊ " ဟူ၍ "က"မှ "င" အက္ခရာအထိဆိုပါ။ လက်တွေ့ဆိုကြည့်ပါ။ ထူးခြားပါလိမ့်မည်။ ၆ ဂဏန်းသမားများ ခြောက်သွေ့စွာ အထီးကျန်ဖြစ်နေတတ်သည်။ ယောက်ျားစင်စစ်မှနေ၍ ခြောက်သွားခြင်း၊ ခြုံးပွဲချငိုချင်နေခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ ပညာရေး - ခြုံးခြုံးကျလောက်အောင် ကြိုးစားပါ။ ချက်ချင်းအောင်မြင်မည်။ နတ်ကတော်သင်တန်း၊ အလှဖန်တီးရှင်သင်တန်းကိုတက်ရတတ်သည်။ ခြောက်လှန့်၍ ညာစားသောပညာရပ်များတတ်လွယ်သည်။ စီးပွားရေး - စီးပွားရေးကံကောင်းနေပြီဖြစ်၍ ခြင်းတောင်းရက်ခြင်း၊ ခြင်ထောင်ချုပ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေးခွေထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများမှ အူခြောက်လောက်အောင် အမြတ်ရရှိမည်။ အကောင်းများပြေပျောက်၍ အဆိုးများရောက်လာပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေး - ခြောက်နေသောချစ်သူနှင့် ခြောက်ရက်ကြာစကားများရတတ်သည်။ တက်မတတ်၊ ချက်မတတ်ငိုတတ်သူတစ်ဦးနှင့် ဖူးစာဆုံတတ်သည်။ ချစ်သူ၏ နာကျည်းမှုဖြင့် ခြောက်လုံးပြူးနှင့် အပစ်ခံရတတ်သည်။ ယတြာ - ချုံထဲတွင် ချိန်းတွေ့နေသာ ချစ်သူနှစ်ဦး၏ကြားထဲသို့ ၆ကျပ်သားခန့် ရှိသော ချီးထုပ်ကိုပစ်ထည့်ပြီး "အချား.. အချား" ဟု အော်၍ အာခြောက်သည်အထိ ပြေးပါ။ ၇ ဂဏန်းသမားများ အခွန်မဆောင်နိုင်သဖြင့် အဖမ်းခံရတတ်သည်။ မျက်ခွံဖွင့်မရခြင်း၊ ခွံ့ကျွေးမှစားနိုင်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ခွက်လက်ဆွဲချင်စိတ်ပေါက်နေခြင်း၊ ခုနှစ်ရက်သားသမီး၏ သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် မေတ္တာထားခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ ပညာရေး - ခိုးချမရဖြစ်တတ်သည်။ ခိုးကူးနေစဉ် အခန်းစောင့်ဆရာမမှ လက်ပူးလက်ကြပ်မိတတ်သည်။ ခုနှစ်ရက်သားသမီးကို ဒုက္ခပေးသော အတတ်ကိုရတတ်သည်။ အချစ်ရေး - ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တူတူ မွေးဖွားသူနှင့် ဖူးစာဆုံရမည်။ ချစ်သူ၏အနှစ်မပါသော အခွံစကားများကို ငြီးငွေ့လာမည်။ ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်တတ်သူတစ်ဦးကို တိတ်တခိုး ချစ်မိလာတတ်သည်။ ယတြာ - ခုံပေါ်တက်၍ ခါးတောင်းကို မြှေုာက်အောင်ကျိုက်ပြီး မယ်ဒလင်တီးကာ အက်ဆစ်အဖွဲ့၏ အခန်း(၇) သင်ခန်းစာသီချင်းကို တွံတေးစိုးအောင်ကီးဖြင့်ဆိုပါ။ ၈ ဂဏန်းသမားများ ယခုနှစ်လုပ်သမျှ တလွဲဖြစ်လာမည်။ အသည်းရောင်ဘီပိုးစစ်၍ negativeပြရာ ၀မ်းသာနေစဉ် HIV positive ၀င်ကြောင်းသတင်းကြားရတတ်သည်။ ချစ်သူထံမှ အဖြေရသည့်နေ့တွင် ကိုယ့်ချစ်သူကို မိမိထက်ပိုချစ်သူက ကားတင်ပြေးတတ်သည်။ ပညာရေး - ရှစ်ပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ ခဏခဏပြင်ဝတ်တတ်သော အကျင့်ရမည်။ စီးပွားရေး - ရှဉ့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ်ရတတ်သည်။ ခြေရှစ်ချောင်းရှိသော သတ္တ၀ါများ(ဥပမာ-ဂဏန်း၊ ပင့်ကူ) စသည်တို့ကို သိပ္ပံနည်းကျ မွေးမြူရင်း သန်းပေါင်းများစွာ(ဆံပင်ထဲတွင်) ချမ်းသာမည်။ အချစ်ရေး - အရှက်မရှိသူတစ်ဦး၏ ရှိခိုးကာ ချစ်ခွင့်တောင်းခံရတတ်သည်။ ရှုပ်ပွေသောချစ်သူကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ ယတြာ - ချစ်သူကို ဥသျှစ်သီးကျွေးပြီး ရှိခိုးကာ ရှက်ပြုံးပြုံး၍ "shit" ဟု ရက်ရက်စက်စက်အော်ပါ။ ၉ ဂဏန်းသမားများ န၀င်းသမားများအဖို့ ယခုနှစ်ဂမ္ဘီရဆန်သော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ကြုံရတတ်သည်။ အထက်မှ ပုဂိုလ်များ(ထန်းတက်သမား၊ ပန်းရံ) တို့၏ လာရောက်ဆက်သွယ်မှုကိုခံယူရမည်။ ဓါတ်စီးသူကို ထိမိ၍ဓါတ်လိုက်သည်။ ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှ ဓါတ်မီးသီးသည် သင့်ခေါင်းပေါ်သို့ ဒုတ်ဒုတ်ထိကျတတ်သည်။ ပညာရေး - ကိုးကွယ်ရာမရှိဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲကျတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်း၍ ကံအကြောင်းမလှဖြစ်တတ်သည်။ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်ရသော ပညာရပ်ကို သင်ကြားရတတ်သည်။ စီးပွားရေး - ကုန်သမျှ ပြန်ရမည်။ ရသမျှ ပြန်ကုန်သည်။ အချစ်ရေး - ကွက်စိတ်ဆရာတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ရက်သား(ရက်ပိုင်းမျှသာ)ကျတတ်သည်။ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်တတ်သူတစ်ဦးကြောင့် ရင်ခုန်ရတတ်သည်။ ယတြာ - ကိုကာကိုလာ သောက်နေသူတစ်ဦးကို ကတ္တရာစေးဖြင့်သုတ်၍ "ကိုးကွယ်ပါ၏" ဟုပြောကာ ကျောကုန်းကို ကုတ်ပေးပါ။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:14pm